Tanora miandrandra ny ho avy Ilaina ny tsikeran’ny mpanohitra saingy …
Fotoanan’ny fifanomezan-tanana izao fa tsy ady lahy pôlitika intsony ho an’ny fikambanana Tanora Miandrandra ny ho avy na ny TMH tarihin’ny filoha nasionaliny Rafidimanana Désiré.
Hamolavola olona isika hoy izy hanatrarana izany ary apetraka ny rafitra manerana ny Nosy mba hahatongavana amin’izany. Nivoitra ireo nandritra ny fifampiarahabana noho ny taona ny vaovao 2020 notanterahin’ny fikambanana teny amin’ny Yandy By pass omaly. Ankoatra izay dia nanome hafatra ireo mpanohitra ny fitondrana ihany koa ny TMH ka nambarany tamin’izany fa tena ilaina izy ireny amin’ny fitsikerana maro hahafahana manatsara zavatra saingy tsy tokony entina handrangintana ny vahoaka hikorontana kosa izany. Vao herintaona sy telo volana mantsy izay, hoy izy no nitondran’ny filoha ka mety sy tsara raha avela hiasa aloha izy. Tsiahivina moa fa ity fikambanana TMH ity ihany sisa no hany fikambanana manohana ny filoha sahy miteny fa ny ankoatra izay dia lasa mangina avokoa, indrindra rehefa mamaivay tahaka izao ny raharaham-pirenena.